Essentuki, अस्पताल "भिक्टोरिया"। sanatoriums समीक्षा
KMV सधैं आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल र सबै पक्षहरूमा छुट्टी मा उच्च गुणवत्ता र उपयोगी रुचि गर्नेहरूलाई लोकप्रिय भएको छ। यो सुरम्य र काकेशस को प्रकृति , हल्का जलवायु र सफा पर्वतमा हावा निको संग मिलेर, energises र जाँगरको उठ्छ।
अस्पताल प्रार्य गठन खनिज वाटर्स
सबै भन्दा ठूलो मोती रूसी - प्रार्य गठन खनिज वाटर्स - विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य रिसोर्ट्स, स्पा र रिसोर्ट्स को एक ठूलो संख्या छ। हाल 115 भन्दा बढी चिकित्सा र स्वास्थ्य जो युरोप र एशिया मा कुनै analogues छ, को प्रार्य गठन खनिज वाटर्स भित्र संस्थाहरू छन्। स्पा सुविधा प्रत्येक अन्य मात्र होइन स्थान पनि प्रदान सेवाहरूको साँघुरो ध्यान फरक। सबैभन्दा अस्पताल उच्च गुणवत्ता आधुनिक चिकित्सा-निदान उपकरण को एक उच्च योग्य कर्मचारी र उपकरण छ।
Yessentuki: अस्पताल "भिक्टोरिया"
सफा हावा, सुन्दर पार्क र उच्च खुशबूदार conifers। , Yessentuki एकदम जवान 1825 मा, र अनुकूल यसको 200 वर्षको इतिहास भर स्थापित आराम र सबै रूस भन्दा र विदेश बाट आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न चाहने ती लिन जारी छ। सबै समयमा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र उपचार प्रतिष्ठित मानिन्थ्यो र धेरै रोगहरु विरुद्ध लड्न सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम।
Yessentuki दक्षिणी रूस को लोकप्रिय रिसोर्टमा सहर मध्ये एक हो। अतिथिहरूको मुख्यतया खनिज पानी, शुद्ध पहाड हावा, सुखद जलवायु र अद्वितीय वास्तु स्मारक निको, पराक्रमी पहाड, नदी र भव्य वनस्पतिहरूको एक दृश्य संग सुरुचिपूर्ण प्रकृति द्वारा आकर्षित छन्। Yessentuki, को प्रार्य गठन खनिज पानीको सबैभन्दा लोकप्रिय रिसोर्टमा सकिन्छ।
आधार अस्पताल "भिक्टोरिया" (Essentuki) 22 हेक्टरमा को सुरुचिपूर्ण हरियो क्षेत्र मा, एक सुरक्षित आउटडोर क्षेत्र मा स्थित छ। आफ्नो अतिथि रिसोर्ट सुन्दर परिदृश्य पूरा गर्दछ। हरियो खाली ठाउँहरू, रूखहरू, मूर्तिहरु र फोहराहरू दिन सौंदर्य खुशी को अस्पताल भ्रमण गर्न पर्याप्त भाग्यमानी थिए गर्नेहरूलाई (Essentuki) "भिक्टोरिया"। यस रिसोर्टमा को अतुलनीय सफलता र लोकप्रियता को गोप्य सरल छ: सुन्दर प्रकृति, गुणस्तर प्रभावकारी उपचार, निको पानीका मुहानहरू र प्रार्य गठन खनिज पानीको राम्रो पुरानो परम्परा।
अस्पताल "भिक्टोरिया" सेवाहरू
आफ्नो स्वास्थ्य र गुणस्तर योजना अस्पताल बाँकी ख्याल गर्नुहुन्छ जो कोहीले, सेवा को विविधता रुचि। अस्पताल "भिक्टोरिया" यसको आगंतुकों उपचार र विभिन्न रोगहरु र रोगहरु को रोकथाम लागि प्रक्रियाहरु को सबै भन्दा ठूलो सेट दिन्छ। उपचार कार्यक्रम आफ्नो शरीर आवश्यकताहरू आधारमा कडाई व्यक्तिगत अप गरेको छ। आधारभूत रिसोर्टमा लाइसेन्स र चिकित्सा गतिविधिको 87 प्रकारको प्रमाणपत्र छ। दक्ष विशेषज्ञहरु नियमित उचित प्रमाणीकरण undergo। उपचार कार्यक्रम संग आफैलाई Familiarize एक अस्पताल "भिक्टोरिया" (Essentuki) को रूपमा यस्तो स्थान बारे विस्तृत अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। समीक्षा तपाईं एक विस्तृत चित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। मुख्य गतिविधिहरु: को musculoskeletal सिस्टम को उपचार, को हृदय, endocrine र स्नायु प्रणाली, श्वसन र पाचन प्रणाली, माथिल्लो श्वास रोग, आँखा को उपचार, gynecology र urology मा रोगहरु, पेशागत रोग, चयापचय विकार को रोगहरु।
कहिल्यै Yessentuki शहर भ्रमण गर्ने लगभग सबैलाई, अस्पताल "भिक्टोरिया" छुट्टी अक्सर सकारात्मक प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्। यो अस्पताल यसको आधार 18 उन्नत चिकित्सा र निदान कार्यालय र6सामान्य रिसोर्टमा केन्द्र, साथै स्नातक शिक्षा रूसी चिकित्सा अकादमी को एक क्षेत्रीय केन्द्र को लागि एक मंच छ। "भिक्टोरिया" अस्पताल लागि एक महत्वपूर्ण differentiator यसको आफ्नै पिउने ग्यालरी पनि छ। को अस्पताल को क्षेत्र मा दुनिया मा कुनै analogues छ जो युरोप सबैभन्दा ठूलो पिउने ग्यालरी छ।
यो अस्पताल "भिक्टोरिया" त्यहाँ .. पाचन रोग, मधुमेह, musculoskeletal प्रणाली, महिला प्रजनन अङ्गहरू, फेफडों, रक्त नली र हृदय, आदि को रोगहरु को उपचार को लागि व्यापक कार्यक्रम कार्यक्रम प्रदान तपाईं अस्पताल को आधिकारिक साइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ पूर्ण सूची लागि हो।
रिसोर्ट परिवार बिदा
यो रिसोर्ट मात्र छैन व्यक्तिगत, तर पनि परिवार छुट्टी लोकप्रिय छ कि टिप्पण लायक छ। बच्चाहरु4वर्ष देखि स्वीकृत छन्। आधार अस्पताल "भिक्टोरिया" (Essentuki) मायालु आमाबाबुले धनी एनिमेसन र बच्चाहरु को लागि खेल कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। तपाईं एक बच्चा नीरस र अनिच्छुक हुनेछ के चिन्ता छैन - अनुभवी शिक्षक र एनिमेटरहरु मात्र होइन आफ्नो बच्चा को अवकाश अप रोशन जो अस्पताल, मा काम, तर यो विकास र प्रशिक्षण मा लगे गरिनेछ।
को अस्पताल मा आराम "भिक्टोरिया"
सांस्कृतिक र मनोरञ्जन र आराम कार्यक्रम पनि यसको विविधता तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ। को अस्पताल मा जलयात्रा प्रेमीहरूलाई लागि एक ठूलो स्विमिंग पूल, फिटनेस छ र एरोविक्स प्रशंसक शारीरिक चिकित्सा कोठा, डिस्को एरोविक्स क्लास र Terrenkur कदर हुनेछ। अतिथिहरूको धनी एक अस्पताल (Essentuki) छ जो, अस्पताल र मनोरंजक कला को पुस्तकालय कदर हुनेछ। "भिक्टोरिया" को सुरम्य Arboretum, साँझ हिँड्छ को पक्कै प्रेमीहरूको मूल्यांकन गर्छन् जो मा स्थित छ। खेल प्रशंसक पनि सन्तुष्ट हुने, उपचार को समयमा आफ्नो मनपर्ने शौक मा संलग्न खुसी हुन सक्छ। को अस्पताल को क्षेत्र मा तालिका, ब्याडमिन्टन, डार्ट्स र बिलियर्ड्स कोठा लक्जरी लागि टेनिस र उपकरण लागि बास्केटबल र भलिबल कोर्ट, कोर्ट छ। हलिडे लागि सधैं खुला सना, बाहिरी स्विमिंग पूल र aerosolyary छ। फेयर सेक्स मात्र छैन उच्च गुणस्तरीय उपचार प्राप्त गर्न सक्छन्, तर पनि सना र व्यावसायिक cosmetology केन्द्र फाइदा लिन।
"सुरक्षा र अतिथि को सान्त्वना - सबै माथि" - यो नीति छ, जो अनुसार यो धेरै वर्ष अस्पताल (Essentuki) को लागि आफ्नो ग्राहकहरु संग काम गर्दछ। "भिक्टोरिया" अतिथि को सहज रहन को लागि निम्न अतिरिक्त सेवाहरू प्रदान गर्दछ:
भण्डारण कोठामा, सुसज्जित एक विशेष सुरक्षा प्रणाली संग;
छोराछोरीको मनोरञ्जन कोठा, एनिमेटरहरु र शिक्षकहरूलाई;
कार पार्किंग गार्ड सहित;
सहरी र आन्तरिक संचार र इन्टरनेट।
पनि रिसोर्ट त्यहाँ एक एटीएम, एक फार्मेसी, क्याफे, एक पल्ट, विभिन्न पसलहरूमा र स्मारिका पसलहरूमा, हावा र W / ई टिकट कार्यालय छ।
सम्मान को पिउने ग्यालरी ठीकै "भिक्टोरिया" अस्पताल को मुख्य मणि बोलाउन। 1990 देखि, KMV ग्यालरी असामान्य वास्तुकला पराउँछु गर्न मात्र होइन, तर पनि निको खनिज पानी पानीका मुहानहरू आनन्द पर्यटक हजारौं आकर्षित गर्छ। लागि 5000 मान्छे को दैनिक उपस्थिति डिजाइन तीन ग्यालरीमा, - युरोप सबैभन्दा ठूलो ग्यालरी तीन खनिज पानीका मुहानहरू एक संग्रह समावेश गर्दछ। ग्लास र धातु तत्व संग राजसी भवन पहिलो नजर मा हडताली, तर एक पल्ट भित्र, तपाईं कम छक्क छैन: ग्यालरी को केन्द्र मा स्थित छ मूर्तिकला प्रतीक जो आमा प्रकृति "स्रोत", हामीलाई आफ्नो धन daruyuschuyu। अस्पताल "भिक्टोरिया" (Essentuki) 2014 मा बाँकी बारेमा सकारात्मक समीक्षा छ। को सजावट एक stately संग्रहालय ग्यालरीमा जस्तो, र तपाईं सजिलै स्रोतहरू र औषधीय गुण मा विस्तृत जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले धनी छन्।
तपाईं एक अस्पताल जाने अघि "भिक्टोरिया" तपाईंलाई थाहा छ कस्तो
तपाईं टिकट खरिद वा हात मा टिकट र वाउचर आफ्नो बिदा योजना छन् सोचिरहेका छन् भने यो लेख उपयोगी हुनेछ। को "भिक्टोरिया" अस्पताल (Essentuki) मा - तपाईं उपचार को लागि जाने अघि, तपाईं जहाँ तपाईं जाने योजना स्थान सिक्न आवश्यक छ। समीक्षा तपाईं सबै कागजात को कार्यन्वयनका लागि कार्य योजना अप आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। पहिलो कदम हो भ्रमणको , समुदायको मा क्लिनिक एक अस्पताल कार्ड प्राप्त र तपाईं उपचार गर्न contraindications छैन भनेर निश्चित गर्न। स्पा कार्ड प्राप्त, चिन्ता छैन - एक जटिल प्रक्रिया हो, यसलाई निदान अध्ययन को बस एक मानक सेट, एक महिना भन्दा अब स्थायी छ र विश्लेषण। इच्छित भने, एक अतिरिक्त शुल्क लागि, तपाईं मार्फत सबै अनुसन्धान र परीक्षण गर्ने रिसोर्ट मा आगमन जान सक्नुहुन्छ। तपाईं कुनै पनि सर्जरी वा गंभीर प्रक्रिया छन् भने, सबै सन्दर्भहरू र निष्कर्ष पनि रिसोर्ट मा साथ ल्याउन भूल छैन। तपाईं बच्चाहरु संग छुट्टी मा जाने भने, तपाईं पनि छोराछोरीलाई अघि पर्यटकहरु को प्रतिक्रियाहरू अध्ययन गर्न आवश्यक छ, र एक अस्पताल कार्ड जारी र epidemiological वातावरण को प्रमाणपत्र लिन र अगाडिको खोप को। र, को पाठ्यक्रम, आफ्नो पासपोर्ट, भूल छैन , जन्म प्रमाणपत्र बच्चा अझै उमेर 14 वर्ष पुगेको छ छैन, यदि र अनिवार्य चिकित्सा बीमा को नीति। तपाईं अघिल्लो वर्ष आफ्नो स्पा कार्ड ल्याउन भूल छैन, फेरि रिसोर्टमा जाने भने, यो तपाईं (जहाँ भुक्तानी सीधा कोषाध्यक्ष गर्न बनेको छ अवस्थामा) 3-5% को छुट प्राप्त गर्न एक मौका दिन हुनेछ।
यस रिसोर्टमा प्राप्त गर्न कसरी
Yessentuki एकदम सानो क्षेत्र। सही दृष्टिकोण तपाईंलाई Essentuki को शहर, अस्पताल "भिक्टोरिया" मा आन्दोलन समस्या छैन। कसरी सार्वजनिक परिवहन र ट्याक्सी द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न, तपाईं गाइड सिक्न हुनेछ। आन्दोलन सजिलो को लागि जो कुनै पनि पत्रिका मा खरिद गर्न सकिन्छ कार्ड oznomtes। तपाईं पनि अनलाइन Yessentuki, अस्पताल "भिक्टोरिया" अन्वेषण गर्न सक्छ। स्थानीय आकर्षण र शानदार प्रकृति को फोटो तपाईं प्रसन्न हुनेछ। सफा सडकहरू, सडक र अद्वितीय वास्तु स्मारक indifferent कुनै एक छोड्न हुनेछ। पनि मार्ग नक्सामा Essentuki शहर को सर्वोत्कृष्ट तरिका निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ। "भिक्टोरिया" अस्पताल (यसलाई प्राप्त गर्न कसरी, तपाईं स्थानीय वा ट्याक्सी चालक प्रोम्प्ट गर्नेछौं) पाउन सजिलो छ।
यदि तपाईं रेल आउ, तपाईँले यसलाई स्टप "भिक्टोरिया" तपाईं लिन्छ, यो "अस्पताल Essentuki" स्टेशन प्रविष्ट गर्न ट्याक्सी कल वा शटल बस नम्बर 14 ले आवश्यक छ। सामान्य मा, Yessentuki सानो रिसोर्टमा धेरै छैन ट्रेन स्टेशन टाढा स्थित छ, लगभग2मी, यो पैदल दूरी बारेमा 15-20 मिनेट छ। शटल बस सेवा यो एक ट्याक्सी (चालक लगातार रेलवे स्टेशन मा खडा), यो 100 rubles खर्च हुनेछ फसाउन सजिलो छ, अक्सर छैन।
यदि तपाईं विमान आउ, तपाईंले Mineralnye Vody मा भूमि हुनेछ। अस्पताल (Essentuki) "भिक्टोरिया" मिनरल वाटर देखि 35 km स्थित छ। ट्याक्सी चालक सेवाहरू, नियम, 1000 rubles सारा यात्रा को लागि, 40-50 मिनेट स्थायी भन्दा बढी छैन। खान एक सस्ता तरिका, तर यो धेरै समय लाग्नेछ। त्यसैले तपाईं देखि आवश्यक Mineralnye Vody विमानस्थल रेल Kislovodsk-Mineralnye Vody र Yessentuki को रोक्न प्राप्त त्यहाँ लिन रेल / रेलवे स्टेशन गर्न शटल बस मा प्राप्त गर्न। रेल तालिका परिवर्तन, कहिलेकाहीं तिनीहरूले हरेक 20 मिनेट, कहिलेकाहीं हरेक 1 घण्टा, मा दिन को समय आधारमा चलाउन। समय सडक, 50 मिनेट मा बिताए। बस वा ट्याक्सी मा: Essentuki मा पुग्दै, कुनै पनि सुविधाजनक बाटो Resort प्राप्त गर्नुहोस्।
के तपाईं रिसोर्टमा आगमन मा पहिलो गर्नुपर्छ
तपाईं आगंतुकों को स्वागत गर्न प्राप्त गर्न आवश्यक रिसोर्टमा आगमन पहिलो कुरा। यो यो पहिलो र दोस्रो आवासगृह बीच स्थित छ, पाउन गाह्रो छ। यो के समय तपाईं आइपुग्दा कुरा छैन, सेवा विशेषज्ञहरु प्राप्त दर्ता तपाईंलाई मदत गर्नेछ, घडी वरिपरि संचालित, तपाईंको सबै प्रश्नहरूको जवाफ हुनेछ आफ्नो कोठा र स्पा पुस्तक साँचाहरू हातमा दिइनेछ। यो "भिक्टोरिया" चेकआउट एक अस्पताल मा 8.00 मा समय भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ।
तपाईं सामाजिक बीमा कोष, तर जो कारण लागि उपचार को लागि जाने छ भने, तपाईं दिन र समय एक टिकट भित्र, त्यसपछि तपाईं forewarned गर्न तपाईं अगाडि वा पछाडि केही दिन रहन उत्प्रेरित गर्ने रिसोर्टमा व्यवसायीक आवश्यक आउन सक्नुहुन्छ।
यस रिसोर्टमा मा आफ्नो रहन समयमा तपाईं कुनै पनि उजुरी वा दावी छ भने, त्यसपछि तपाईं आफ्नो डाक्टर वा शरीर टाउको सम्पर्क गर्न पनि एक गुणस्तर नियन्त्रण टेक्नीसियन संग सम्पर्क गर्न सकिन्छ आवश्यक छ। गम्भीर समस्या लागि उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण लागि समाज सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, टिप्पणी संग: Essentuki, अस्पताल "भिक्टोरिया"। समीक्षा र उजुरी विचार र उपयुक्त कारबाही।
अस्पताल "भिक्टोरिया", Essentuki। पर्यटकहरु को समीक्षा
मान्छे को हरेक वर्ष हजारौं स्वास्थ्य रिसोर्ट मा जानुहोस्। भारी लोकप्रियता 2014 अस्पताल "भिक्टोरिया" (Essentuki) मा प्राप्त। समीक्षा 2014, vacationers gstavili जो पक्कै तपाईंलाई मदत गर्नेछ। "बुक - forearmed" - को हितोपदेश यसो भन्छ। एउटा टिकट खरीद गर्नु अघि, हामी तपाईंलाई तिनीहरूले बारेमा Essentuki, अस्पताल "भिक्टोरिया" के लेख्न पढ्न सुझाव। समीक्षा, विस्तार सिफारिसहरू र चित्रहरू तपाईं तस्वीर प्रकट गर्छ। धेरै vacationers नियमित विभिन्न फोरम र वेबसाइट, शेयर अनुभव मा एक अस्पताल मा बाँकी बारेमा टिप्पणी, मर्मतसम्भार, कर्मचारी, उपचार र अन्य सेवाहरू को एक अनुमान दिनुहोस्। अक्सर उच्च गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा, आरामदायक वातावरण र प्रभावकारी परिणाम, जो छैन आउँदै मा लामो उल्लेख गरे। व्यक्तिगत ध्यान, Yessentuki प्रदान गर्दछ जो कर्मचारी र अतिथि न्यानो स्वागत, अस्पताल "भिक्टोरिया" बारे टिप्पणी। भान्सा को समीक्षा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आहार को उपचार चिकित्सक अनुसार डिजाइन गरिएको छ, यो अक्सर आहार अझै पनि धेरै स्वादिष्ट छ, तर।
सम्पर्क अस्पताल "भिक्टोरिया"
एक आरामदायक सोख लागि योजना र हामी तपाईंलाई थप विस्तृत सम्पर्क जानकारी थाह प्राप्त गर्न प्रस्ताव।
अस्पताल "भिक्टोरिया" (Essentuki) सम्पर्कहरू छ:
ठेगाना, जिप कोड: 357600 Stavropol, Yessentuki, उल। Pushkin, 22।
भौगोलिक र जीपीएस-निर्देशांक:
देशान्तर: 42 ° 52'16.33 "ई (42.871203)
अक्षांश: 44 ° 2'57.01 "N (44.04917)
फोन: 8 8793-31-30-90, 8 804-333-08-06 - रूस को सम्पूर्ण लागि यो टोल-मुक्त संख्या।
फ्याक्स: 8 (8793) 31 30 90।
राम्रो छुट्टी छ।
इजरायल मा क्यान्सर उपचार बारे हामी के भन्न सक्छौं?
अस्पताल "Agria" अघि स्थित थियो जो बन्दोबस्त, - सम्पूर्ण परिवारको लागि एउटा अचम्मको छुट्टी
इस्राएलका स्तन क्यान्सर निदान कसरी
Manor मेडिकल सेन्टर इस्राएलका हड्डी क्यान्सर को व्यापक उपचार प्रदान गर्दछ
कसरी विदेश यात्रा लागि चिकित्सा बीमा प्राप्त गर्न
संवेदीकरण "ब्लू बर्ड" (बालाकावो) - फोटो, समीक्षा
उचित नाम के हो? उचित नाम: उदाहरणहरू
एक पंच कसरी चयन गर्ने?
गुणस्तर ग्राहक सेवा - कुनै पनि संस्थाको लागि सफलता एउटा तरिका
को पर्म क्षेत्र को जनसंख्या: को जातीय संरचना र प्रशस्त
मखाचकला लोकप्रिय पानी पार्क
Frederic Beigbeder "आदर्श": सारांश, समीक्षा
उनको रोग को Xenia Bubenko इतिहास
Cystitis: महिला को उपचार
को छत - समीक्षा, सुविधा र लाभ
TELSTAR3* (पोर्टो) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
सबै स्वाद को लागि बन्दागोभी लागि तकलीफ: को slicer गर्न चक्कु देखि
प्रसब लागि तयारी: तपाईं जान्नु आवश्यक?